साउन महिना र सोमबारको महत्व, साउनमा ब्रत किन,कसरी र कसले बस्ने ?
वि.सं ६ श्रावण २०७६, सोमबार ००:०४
काठमाडौं – साउन महिना अर्थात भगवान शिवको महिना । अर्को कुरा महिलाहरुको लागि विशेष महिना । शिवको महिना भएको यो महिनाको हरेक सोमबार अविवाहित महिलाहरुले ‘राम्रो वर पाउँ’ भनि र विवाहित महिलाहरुले ‘श्रीमानको आयू लामो होस’ भनि शिवको आराधना गर्ने गर्दछन् ।
९० वर्षका हजुरआमा देखि लिएर साना –साना नानीहरु युवा युवतीहरु यस महिनामा बढी सौभाग्य आदान प्रदान गर्ने गर्दछन् । विशेषगरी महिलाहरुको लागि साउन महिना विशेष हुन्छ ।सोमबार शीवजी प्रशन्न बनाउन पानी पनि नखाइकन व्रत बस्ने गर्दछ ।
वर्षा, प्रेम र झरीको संगम साउन महिना धार्मिक हिसावले पनि हिन्दु नारीहरुको लागि अर्को महित्वको महिना हो । झरीमा रुझदै हिड्दा छुट्टै आनन्दको अनुभूति पैदा हुन्छ । प्रेमी प्रेमीको जोडीहरुमा नयाँ उमङग छाउँछ । यसबेला हाँसेको प्रकृतिको त्यो चम्किलो अनुहारले मानिसमा शक्ति, साहस, सुख प्राप्ति गरिदिन्छ भन्ने एक प्रकारको अनगन्तिी भावहरु रहेका छन् ।
महिनाभरी नै बस्नुपर्छ ब्रत ?
सोमबार मात्रै बस्नुहोस् ब्रतः चतुर्मासको अवधि चार महिनाको लागि हुने गर्दछ । जुन असार शुक्ल एकादशीको दिनदेखि कात्तिक शुक्ल एकादशीको दिनसम्म चल्ने गरेको छ । यो चार महिना विशेष गरी तिनै व्यक्तिहरुको लागि विशेष हुने गर्दछ कि जो ध्यान साधना र उपासना गरिरहेका छन् । तर श्रावण महिनामा ब्रत बस्नु सबै हिन्दूहरुको कर्तव्य हो । सोमबारको ब्रतहरु सोमबार बसेर मात्रै फल पाईन्छ भन्ने धेरै हिन्दूहरुको सोचाई हुन सक्छ । तर, त्यो सबै मिथ्या प्रचारबाजी मात्रै हो । श्रावण महिनामा जुन सुकै दिन ब्रत बसेपनि यसको बराबर फल पाईन्छ ।
यदि तपाई श्रावण महिनामा व्रतका पालना गर्नुहुँदैन भने तपाई अवश्य पछुताउनु हुनेछ । यो महिनामा तपाईको मानसिक तनाव कम गर्न र पापको नास गर्नको लागि ब्रत आवश्यक छ । यदि यो महिनामा नियम विरुद्ध अन्न ग्रहण गर्नुहुन्छ । ब्रह्मचर्यको पालना गर्नुहुन्न भने यमे निश्चित छ कि तपाई गम्भीर रोगबाट ग्रस्त हुनुहुनेछ । यो व्रत महिला र पुरुष दुबैको लागि आवश्यक रहेको छ ।
मकवानपुरमा गाँजा तस्कर र प्रहरीबीच गोली हानाहान, असई घाइते
पाँच जनाको टोलीसहित रअ प्रमुख नेपालमा